Ataovy mora kokoa ny andronao isan'andro amin'ireto mpitantana lahasa 2 maimaim-poana ireto | Famoronana an-tserasera
Na miasa amin'ny ekipa ianao ho toy ny sary sy / na mpamorona tranonkala, na raha ataonao irery, dia hisy andro izay tsy ahitanao toerana malalaka ao amin'ny sehatr'asanao hametahana paositra iray hafa. Azonao atao ny manisy haingo ny studio manontolo miaraka amina taratasy mavo ametaka amam-polony, saingy mamporisika anao izahay hijery ireo fitaovana atolotray etoana anao anio. Angamba manapa-kevitra ny hampihena ny isan'ny taratasy ianao ary hahazo mazava kokoa ny asanao.
ny mpitantana ny lahasa dia programa na rindranasa ahafahantsika manasokajy sy mandahatra ny asanay amin'ny mason-tsivana samihafa, toy ny laharam-pahamehana noho ny hamehana amin'ny daty fanaterana, ny fotoana fanodinana sns. Ny tsara indrindra dia ny mety hisian'ny zarao ny asanay miaraka amin'ny olon-kafa, mpikambana ao amin'ilay vondrona miasa iray ihany, mba hametrahana sy hanomezana andraikitra, haneho hevitra, hizara, handray anjara ... Fomba tsara manana ekipa misy antony, mifantoka amin'ny tanjona iray ihany, miara-milahatra mba hahazoana zavatra tena mivaingana: fahombiazana.
1 Mpitantana asa maimaimpoana
Mpitantana asa maimaimpoana
Androany izahay dia manome anao safidy fohy amin'ireo mpitantana asa maimaim-poana afaka manampy anao izy ireo amin'ny isan'andro isan'andro. Mbola maro hafa, mazava ho azy. Afaka manoratra ao amin'ny Google ianao ary mizaha mitady vahaolana hafa, saingy mino izahay fa handresy lahatra anao ireo.
Izaho manokana dia tena tiako ity mpitantana ny lahasa ity. Azo lazaina fa natao ho an'ireo olona izay maniry izany mandroso haingana amin'ny alàlan'ny rindrambaiko misy programa, izay tsy mampaninona anao ny mianatra hitsin-dàlana fitendry vaovao hifindra mora foana. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny web browser, mba hahafahanao mampiasa azy amin'ny rafitra rafitra rehetra, na aiza na aiza ary tsy mila misintona na inona na inona amin'ny solosainao.
Ity fampiasa ity, izay mety hanelingelina ny maro, dia tsy manelingelina ahy mihitsy. Nefa tadidio fa miankina amin'ny fidirana amin'ny Internet hiditra isika.
Any Asana dia tena mora ny manomboka miasa. Ampidiro fotsiny ny tranonkala, ampidiro ny mailakao (hisoratra anarana) ary ekeo ny mailaka fanamarinana izay ho tonga ao amin'ny mailakao. Mila milaza aho fa nahavariana ahy ny hafainganan'ny hafainganan'ny mailaka (tsy iray minitra).
Raha vantany vao miditra amin'ilay rohy entin'ny mailaka ianao dia tsy maintsy manaraka fotsiny ireo dingana voalaza (ny anaranao, ny sarinao, ny mpikambana ao amin'ny ekipa hafa ary ny mailaka misy azy ireo ary ny anaran'ny ekipa).
Rehefa miditra amin'ny efijery Task Manager ianao, dia tena intuitive be daholo ny zava-drehetra ary tsy maneho olana akory izany hahafantarana azy io.
Ny mampihomehy dia ny fiarahan'ny mpikambana ao amin'ny ekipa no mijery amin'ny fotoana tena izy. Izany hoe: ho hitanao amin'ny fotoana tena izy ny zavatra ataon'ny tsirairay (mamorona asa vaovao, manome vaovao azy ...).
Raha tiako i Asana noho ny fahaizako mamakivaky ny interface misy azy amin'ny hitsin-dàlana fitendry, Wunderlist no ilaina mba hahatonga ahy ho tonga lafatra. ny famolavolana hafa noho ny teo aloha, ankehitriny kokoa, miaraka amina modely hazo manahafana azy sy mahafinaritra. Ao amin'ny Wunderlist dia tsy afaka ny ho variana ny masontsika, satria mandeha mivantana amin'ny varavarankely amin'ny ankavia sy ny faritra iasana (izay hanoratanay ny asanay). Ao amin'ny tsanganana ankavia dia nalaminay ireo fizarana samihafa hanoratana ny lisitry ny asanay. Misy zavatra tsara dia tsara ny manendry mpampiasa maromaro amin'ny lisitra samihafa: azonao zaraina amin'i Miguel sy Juan ny lisitr'ireo asa ary ny lisitr'ireo sarimihetsika hijerena an'i Sandra sy Laura. Ohatra.
Ny anaran'ireo lisitra dia azo ovaina. Jereo ny kisary amin'ny voanjo ao amin'io tsanganana io ihany, miorina amin'ny faritra ambany ankavanana, satria eo no ahafahanao miditra amin'ny Prefers ary manova ny masontsivana toy ny fiteny misy ny takelakao (ankoatry ny zavatra maro hafa)
Toa an'i Asana, miasa amin'ny alàlan'ny tranokalanay izy io ary mitovy ny fomba ahazoana azy (mila misoratra anarana ianao vao manomboka).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Mpitantana asa maimaimpoana 2 izay hanamora ny andronao
Bitsika 5 maimaim-poana (VI)